Mootummaan Keeniyaatiifi paartiin mormituu walii galuu ibsan.
NuuralHudaa	 Mar 11, 2018 0
Pirezedentiin Keeniyaa Uhuuruu Keeniyaattaa guyyaa dheengaddaa dursaa garee paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odiingaa waliin masaraa mootummaa ‘Haraambee Haawus’tti mari’ate. Hoggantoonni siyaasaa lameen Ibsa marii isaanii booda…
NuuralHudaa	 Mar 10, 2018 0
Prezdaantiin Ameerikaa Donaald Traamp affeerraa marii prezdaantii Kooriyaa Kaabaa irraa dhufeef kan fudhate tahuu beeksise. Traamp akka jedhetti affeerraan prezdaantii Kooriyaa Kaabaa Kim-Jong Un irraa isaaf dhihaateef, dhimmaa Niwukilarii…
Waraanni Makkalaakayaa Godina Booranaa Magaalaa Mooyyaalee kresstti dhukaasa banuun, yoo xiqqaate namoota 9 ajjeessuun heddu ammoo madeesse. Ganama har'aa magaalaa Mooyyalee naannawa Shawaa Barri jedhamu kessatti dhukaasni hamaan akka ture…
NuuralHudaa	 Mar 9, 2018 0
Umar Ibnu Ubeeydullaah nama sadaqatuun beekamuudha. Guyyaa tokko osoo daandii irra deemaa jiru ooyruu biqiltuu takka bira gahe, wanti inni iddoo ooyruu kana biratti arge hedduu isa ajaa'ibe. Gabrichi tokko iddoo Ooyruu biqiltuu kana…
Ertiraan dargaggoota sirna awwaalcha Haaji Muusaa Muhammad irratti hirmaatan heddu hiite
Mootummaan Ertiraa dargaggoota sirna awwaalcha Haaji Muusaa Muhammad Nuur irratti hirmaatan heddu kan hiite tahuu BBC'n gabaase. Haaji Muusaan hooggaanaa mana barnoota Islaamaa Diya'a jedhamuu kan turan yoo tahu, qajeelfama mootummaa didan…
Magaalota Oromiyaa Keessatti hidhaan hammaatee itti fufee jira.
NuuralHudaa	 Mar 8, 2018 0
Lagannaan gabaa fi manaa bahuu dhabuu guyyoota sadihiif geggeeffamaa ture, guyyaa kaleessaa kan xumurame yoo tahu, kanuma hordofuun magaalota Oromiyaa adda addaatti Komaand poostiin namoota manneen daldalaa guyyoota sadiin darban cufan,…
Ministeerri Haajaa alaa Ameerikaa, labsiin yeroo muddamaa ariitiin akka kaafamu gaafate.
Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Reeks Tiilarsan guyyaa kaleessa Itoophiyaa kan seene yoo tahu dhimma haala siyaasaa biyyaatti irratti angawoota mootummaa waliin marii godhee jira. Haasawa waltajjii midiyaaleef godhe irratti, mootummaan…
Hooggantoonni Salahaddiiniin bakka bu’an, dachii Shaam, Misraa fi iiraaq bulchuuf tattaaffii godhanii jiru. Haa tahu malee dachii bal’aa san akka hoogganaa isaanii isa duraa sanitti bulchuun heddu itti ulfaate. Salahaddiin hawaasa muslimaa…
Alii Duman Turkiyaa Godina Gaaziyaanteep jedhamtu keessatti horsiisee bulaa yoota’u; “guyyaa tokko hoolota tiyyarraa rifeensa osoo murutti jiru, wanti hedduu narifachiise tokko naqunname jechuun jalqa. “Akkuma barame hoolataa tiyya…
Ameerikaa keessatti baay’inni namoota sababaa dhugaatii kamriitiin du’anii garmalee dabalaa akka dhufe, “washingto post” eeruun barruun”Times” gabaase. Akka qorannoo kanaatti sababa dhugaatii alkooliitiin, bara 2014 qofa namootni 30,700…